WhatsApp | တွင် အရောင်များဖြင့် စာများရေးနည်း Androidsis
Ignacio Sala | 25/11/2021 12:00 | Android application များ, Whatsapp
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည် WhatsApp ကို ၎င်းတို့၏အဓိကနှင့် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များမျှဝေခြင်းအတွက်သာမက၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ နှင့်အားလုံးအထက်တွင် မုန်းတီးမှု အသုံးပြုသူများစွာ နားထောင်ရန် ငြင်းဆန်သော အသံမက်ဆေ့ချ်များ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသုံးအများဆုံး အပလီကေးရှင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် WhatsApp သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စကားဝိုင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်၊ အီမိုတီကွန်များ၊ စတစ်ကာများ၊ ကာတွန်း GIF များပေးပို့ခြင်းနှင့် စာသားဖော်မတ်ချခြင်းတို့ကို ကန့်သတ်ထားရန် ရွေးချယ်စရာများကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား Third-party အက်ပ်လီကေးရှင်းများသို့ အားကိုးအားထားပြုရန် တွန်းအားပေးသည်။ WhatsApp တွင်ရောင်စုံရေးပါ.
1.1 Stylish Text အလုပ်လုပ်ပုံ
1.1.1 1 နည်းလမ်း
1.1.2 နည်းလမ်း ၂
2 ရဲရင့်ခြင်း၊ စာလုံးစောင်းနှင့် ရိုက်နှိပ်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ WhatsApp တွင် စာသားဖော်မတ်လုပ်နည်း
2.1 WhatsApp တွင် bold အသုံးပြုနည်း
2.2 WhatsApp တွင် စာလုံးစောင်းကို အသုံးပြုနည်း
2.3 WhatsApp တွင်စာသားများ ဖြတ်၍ မည်သို့ရေးရမည်နည်း
2.4 WhatsApp တွင် monospace တွင်မည်သို့ရေးရမည်နည်း
3 Fancy စာသား
ဤဆောင်းပါးကို (နိုဝင်ဘာ 2021 ခုနှစ်) တွင် ထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင် Play Store တွင် စာသားအရောင်ပြောင်းရန် အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာရှိသည်၊ ၎င်းကို မည်သည့်အရောင်သို့ပြောင်းသည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြာရောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန်သာ ခွင့်ပြုထားသည်။တခြားအရောင်မပါဘူး။
ကျွန်တော်ပြောနေတာက Stylish Text app ၊ ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ app တစ်ခုပါ။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါကြော်ငြာများပါဝင်သော်လည်း အက်ပ်အတွင်းဝယ်ယူမှု အမျိုးအစားမရှိပါ၊ ဖောင့်အသစ်များကိုသာ လော့ခ်ဖွင့်ခွင့်ပေးသည့် ဝယ်ယူမှုများတွင် အပြာမှလွဲ၍ အခြားအရောင်အသစ်များကို အသုံးပြုရန် မဟုတ်ပါ။
Play Store မှာ ရှာလို့ရတယ်။ နာမည်တူအခြားအက်ပ်လျှောက်လွှာတစ်ခု လစဉ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် စာရင်းသွင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်၊ အက်ပ်လီကေးရှင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ပြီးသည်နှင့်ပြသပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တွင်မဖြစ်မနေပုံပေါ်သည့်စာရင်းသွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူကိုထိုဝင်းဒိုးကိုပိတ်ရန် X ကိုရှာဖွေခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။
အရာ၏လျှောက်လွှာ ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေပါသည်။, ကြော်ငြာများသာပါဝင်သည်။အက်ပ်အတွင်း ဝယ်ယူမှုများမရှိပါ။
ဤအပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်မှာ၎င်း Android ပေါ်တွင် WhatsApp ကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများသာအပြာရောင်ဖြင့် စာသားများကို မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အပြာရောင်ဖြင့် ဖော်မတ်ပေးခြင်းဖြင့် iPhone ရှိသူထံ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ ပေးပို့ပါက၊ ဒါက ထုံးစံအတိုင်း စာသားကို မြင်လိမ့်မယ်။. စာသားကို အပြာရောင်နဲ့ဖော်မတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ဖော်မပြဖို့ မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါးကို စမ်းသပ်ဖို့ အခွင့်အရေးရလို့ ပြောတာပါ။
မင်းမှာ ဘာပြဿနာမှ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျန်သော စာသားဖော်မတ်များ အပလီကေးရှင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ရရှိစေပါသည်။ ဤဖော်မတ်များသည် iOS သို့မဟုတ် WhatsApp ၏ Windows နှင့် Mac ဗားရှင်းများအပါအဝင် အခြားလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် လုံးဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Stylish Text အလုပ်လုပ်ပုံ
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်စေလိုသည်ကို ချိန်ညှိရပါမည်။
ရေပေါ်ပူဖောင်းကတစ်ဆင့်: ဤပူဖောင်းဒီဇိုင်းကို သင်နှစ်သက်သော်လည်း ပြဿနာမရှိဘဲ သင်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းတွင် ပူဖောင်းတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် စိတ်အနှောက်အယှက်အရှိဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်စရာများမီနူးမှတဆင့်− ဤရွေးချယ်မှုမှတစ်ဆင့် စတိုင်လ်ကျသောစာသားကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကြံပြုချက်အရှိဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Google ၏စာသားရွေးချယ်မှုများမှတစ်ဆင့် အမှန်တကယ်အသုံးပြုလိုသည့်အခါမှသာ ၎င်းကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း WhatsApp တွင် စာသားအရောင်ကို ပြောင်းပါ။ Sylish Text ဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ စိတ်ကြိုက်အလွှာပေါ်မူတည်၍ နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။
ပထမဦးစွာ WhatsApp chat ကိုသွားပါ။ ကျနော်တို့စာသားရေးပါ အပြာရောင်ဖြင့် ဖော်မတ်လုပ်လိုသည်။
ထိုအခါ စာသားကိုရွေးပြီး ဒေါင်လိုက်အချက်သုံးချက်ကို နှိပ်ပါ။ ဖြတ်ရန်၊ ကော်ပီနှင့် ကူးထည့်ရန် ခွင့်ပြုသော ပေါ့ပ်အပ်မီနူးတွင် ပြသထားသည်။ (အချို့သော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများတွင် အချက်သုံးချက်ကို မနှိပ်ဘဲ ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကို ပြသထားသည်)။
ပြထားတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထဲကထဲက၊ ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် Sytlish စာသား WhatsApp ပေါ်ရှိ floating window တွင် application ကိုဖွင့်ရန်။
နောက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသော ဖော်မတ်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။ဤကိစ္စတွင် ၎င်းသည် အပြာရောင်ဖြင့် စာသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤရေပေါ်ပြတင်းပေါက်ပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းကို အပေါ်နှင့်အောက်သို့ ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်မှုအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါသည်။
တိကျသောမက်ဆေ့ချ်တစ်ခုပေးပို့သောအခါ WhatsApp ၏စာတစ်စောင်ကိုပြောင်းလဲရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အက်ပ်လီကေးရှင်းကိုဖွင့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသောစာသားကိုရေးရန်နှင့် Share ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ရဲရင့်ခြင်း၊ စာလုံးစောင်းနှင့် ရိုက်နှိပ်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ WhatsApp တွင် စာသားဖော်မတ်လုပ်နည်း
အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း သင်္ကေတများကို အလွတ်ကျက်ရန် မလိုအပ်ပါ။ စာလုံးကြီး သို့မဟုတ် စာလုံးစောင်းဖြင့်ရေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်မတ်လိုသောစာသားကိုရွေးချယ်ပြီး ဒေါင်လိုက်အစက်သုံးစက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
အချို့သော terminals များတွင် မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်ပေါ် မူတည်ပြီး၊ ရွေးချယ်မှုများကို တိုက်ရိုက်ပြသသည်။ စာသားကို format လုပ်ရန်ရရှိနိုင်သည်။
မဟုတ်ပါက ပြထားသော drop-down menu တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ လိုချင်သော option ကို ရွေးပါမည်။
WhatsApp တွင် bold အသုံးပြုနည်း
လိုချင်ရင် WhatsApp တွင်ရဲရင့်စွာရေးပါ စာသား၏အစတွင် ခရေပွင့်တစ်ခုနှင့် စာသားအဆုံးတွင် အခြားတစ်ခုကို ထည့်ပါမည်။
* မင်္ဂလာပါကလေး၊ ဒါကမင်း WhatsApp ပေါ်မှာရဲရင့်တဲ့စာသားရေးပုံပါ။
WhatsApp တွင် စာလုံးစောင်းကို အသုံးပြုနည်း
လိုချင်ရင် WhatsApp တွင်စာလုံးစောင်းဖြင့်ရေးပါ စာသား၏အစတွင် အောက်မှတ်တစ်ခုနှင့် စာသားအဆုံးတွင် အခြားတစ်ခုကို ပေါင်းထည့်ပါမည်။
_ မင်္ဂလာပါ၊ ဤအရာသည် WhatsApp ပေါ်တွင်စာလုံးစောင်းများရေးပုံဖြစ်သည်။
WhatsApp တွင်စာသားများ ဖြတ်၍ မည်သို့ရေးရမည်နည်း
လိုချင်ရင် WhatsApp တွင်စာသား ဖြတ်၍ ရေးပါ ထပ်ထည့်ပါမယ်။ ~ စာသား၏အစတွင်၊ စာ၏အဆုံး၌အခြားတစ်ခု
~မင်္ဂလာပါကလေး၊ ဒါကမင်း WhatsApp မှာဖြတ်တောက်ထားတဲ့စာသားကိုမင်းဘယ်လိုရေးတာလဲ~
ရေးသားဖို့ ~ ကီးဘုတ်၏သင်္ကေတအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူရပါမည်။
WhatsApp တွင် monospace တွင်မည်သို့ရေးရမည်နည်း
လိုချင်ရင် WhatsApp တွင် monospace ၌ရေးပါ စာသား၏အစတွင် «` နှင့် စာသားအဆုံးတွင် အခြားတစ်ခုကို ပေါင်းထည့်ပါမည်။
““ မင်္ဂလာပါကလေး၊ ဒါကမင်း WhatsApp ကို monospace မှာစာဘယ်လိုရေးသလဲ« `
ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးထားသည့်အတိုင်း Stylish Text သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့် တစ်ခုတည်းသောအပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ စာလုံးများ၏ ရိုးရာအနက်ရောင်ကို အပြာဖြင့် အစားထိုးပါ။၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအပြောင်းအလဲကို ပြုလုပ်နိုင်စေမည့် တစ်ခုတည်းသော အပလီကေးရှင်းဖြစ်ခြင်း။
သို့သော်၊ Play Store တွင် အခြားအပလီကေးရှင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည်။ တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုပါ။Fancy Text သည် တကယ်ကို မီးမောင်းထိုးပြထိုက်သော တစ်ခုတည်းသော စာဖြစ်သည်။
စာသား၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်မီးမောင်းထိုးပြရန်မထိုက်တန်ပါ၊ ဒါကမဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား WhatsApp မှတစ်ဆင့် မျှဝေလိုသော စာသားကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင့်အတွက် Fancy Text generator & သင်္ကေတများကို ရနိုင်ပါသည်။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါကြော်ငြာများ ပါဝင်သော်လည်း အက်ပ်အတွင်း ဝယ်ယူမှုများ မရှိပါ။
ဖန်စီစာသားမီးစက် & သင်္ကေတများ
ဤအက်ပ်များသည် သဘောကျပုံရသည်။ ၎င်းတို့သည် စက်အားလုံးတွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်ပါ။ (ဖြစ်နိုင်သည် စိတ်ကြိုက်အလွှာကြောင့်) အထူးသဖြင့် terminals များနှင့် Samsungထို့ကြောင့် သင့်တွင် ဤထုတ်လုပ်သူထံမှ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပြီး WhatsApp တွင် အပြာရောင်စာလုံးကို မသုံးနိုင်ပါက၊ နှစ်ခါမစဉ်းစားလိုက်ပါနှင့်၊ သင်မည်မျှပင်ကြိုးစားနေပါစေ ၎င်းသည် အလုပ်မဖြစ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » WhatsApp တွင်အရောင်များဖြင့်အက္ခရာများကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ